देशको नागरिक हुँदाहुँदै "अनागरिक" किन हुन्छन महिला ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentदेशको नागरिक हुँदाहुँदै “अनागरिक” किन हुन्छन महिला ?
September 19, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Event 0
सद्भाव थियटर को प्रस्तुती नाटक अनागरिक हिज आईतबार साखु मा देखाईएको थियो । एकल महिला हरुले भोग्नु परेको पिडालाई नाटकले प्रस्ट सँग प्रस्तुत गरेको थियो ।
टिका भक्त जिरेलको लेखन तथा निर्देशन रहेको उक्त नाटक मा पात्रहरु अमृता खनाल, कुमार सिम्खडा, ज्योति राइ, निशा पाख्रिन तमाङ, हेमन्त अर्याल, पुर्खा जित राइ र सिव अधिकारी को अभिनय थियो ।
नेपाली समाज मा धेरै एकलमहिला हरु अहिले पनि नागरिकता पाउन बाट बन्चित छन । यस नाटकमा पनि एउटी युवती जो सानै छदा आफ्न बाबु आमा लाई गुमाएकी थिईन उनी स्कुल पढ्दा पढ्दै ड्राइभर सँग प्रेममा पर्छिन दाजुले विवाह को लागि स्विक्रिती नदिएपछी भागी विवाह गर्छन उनिहरु ।
विवाह न माईती लाई स्विकार्य थियो न त पारीवार लाई नै एसरी कथा अघी बढीरकेको थियो कथा को मध्य तिर ति युवती को श्रीमानको एक्सिडेन्ट पारी मृत्‍यु हुन्छ ।
अनी नाटक ले नयाँ मोड लिन्छ ति युवती को संघर्श नागरिकता बनाउनको लागि । नाटक सक्किने बेला सम्म पनि सासु अनी दाई ले नगकिकता बनाइदिन नमानेपछी दएशकहरु स्वयम स्टेजमा गएर दाजु र सासु लाई सम्झाएर नागरिकता बनाउन वाध्य बनाएका थिए ।
यि किसिमका घटना समाजमा दिनहु हुन्छ त्यसैले डब्ल्यु एच आर र अक्स्फार्मले सहकार्य गरेर बिभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम राखेर चेतना फैलाईरहेको छ ।